Masinina mameno rano, masinina mameno zava-pisotro, tsipika famenon-jaza mafana - Higee
Kitapo milina famenoana simika karazana Cup
Andalana milina famenoana shampoo mandeha ho azy
Fitaovana milina mameno syrup avo lenta
Milina tavoahangin-tsakafo PET tavoahangy mafana
Miaraka amin'ny R & D matanjaka sy ny fahaizan'ny famokarana aondrana any amin'ny firenena 100+ ho an'ny karazan-tsakafo famenoana sy famonosana isan-karazany amin'ny indostrian'ny sakafo, zava-pisotro, pharmaceutika, kosmetika sns.
Manangana ny masininay amin'ny faritra marika malaza sy fitaovana tsara kalitao izahay. Manana fifehezana QC henjana izahay hanomezana milina manara-penitra manana laza tsara ao an-trano sy any ivelany. “Ny kalitao no kolontsainay.”
Tsy ho an'ny famenoana milina fanoratana, fametahana marika ary fonosana fotsiny ihany, manome serivisy fijanonana ho an'ny mpanjifa izahay, anisan'izany ny milina mitsoka tavoahangy, rafitra fitsaboana rano sns.
Manana ekipa injeniera teknika matanjaka sy ekipa varotra maneran-tany izahay miaraka amina serivisy amin'ny fiteny maro ho an'ny varotra mialoha sy aorian'ny fivarotana. Miaraka amin'ny fanandramana manadio ladoany.
HIGEE MACHINERY dia manana traikefa matihanina mihoatra ny 15 taona.
HIGEE MACHINERY dia mirotsaka amin'ny famolavolana sy famokarana tsipika milina famenoana sy fametahana marika amin'ny sehatra isan-karazany indrindra amin'ny indostrian'ny rano, zava-pisotro ary zava-pisotro. Mazava ho azy koa fa manome milina ho an'ny indostrian'ny sakafo, pharmaceutika, cosmetika ary simika.
Nalefa tany amin'ny firenena maherin'ny 100 manerantany ny masininay. Manana tombony izahay hanao ny vahaolana tsara indrindra hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa ary mifantoka amin'ny kalitao sy serivisy tsara hananganana sy hitazomana ny fifandraisana eo amin'ny orinasa maharitra miaraka amin'ny mpanjifa manerantany.
Indostria Simika isan'andro
Vaovao farany & Lahatsoratra
Ny mpanjifa rehetra dia maniry ny hanana milina Filling Capping sy Famaritana lafatra ho an'ny famokarana fonosana. Miaraka amin'ny zavatra niainantsika, afaka mahita ny vahaolana tsara indrindra izahay mifanaraka amin'ny filanao. Haneho torolàlana teknika vitsivitsy na lahatsoratra vaovao na vaovao eto izahay hampahafantatra anao bebe kokoa.
Fitsidihan'ny mpanjifa kongoley ny milina famenoana
Nandritra ny fampirantiana ny fampiroboroboana ny vokatra iraisam-pirenena sinoa faha-2 tamin'ny novambra, tonga tany Sh ...
Inona no tombony sy fatiantoka ny PLA an ...
Miorina amin'ny olan'ny fanasarahana ny fako, ny vidiny ary ny fiarovana ny tontolo iainana, dia ny tavoahangy PLA ny ...
tsy mitovy amin'ny fehin-kibo fehin-kibo sy ny karazana toerana misy azy izy amin'ny fametahana tavoahangy boribory ankamaroan'ny tim ...
Ahoana ny fomba itokisana ny mpanjifa amin'ny voalohany ...
Mikasika ny fividianana milina indostrialy amin'ny mpanjifa vahiny, izay anton-javatra lehibe indrindra manafatra ...